Plex.Earth Timeviews inopa AEC nyanzvi nemifananidzo yazvino satellite mukati me AutoCAD
Plexscape, vanogadzira Plex.Earth®, chimwe chezvishandiso zvinozivikanwa zveAutoCAD yekumhanyisa mapurani ekuvaka, einjiniya uye ekuvaka (AEC), yakatangisa Timeviews ™, basa rakasarudzika mumusika wepasi rose weAEC, unoita kuti Yakawanda inodhura uye inowanika nyore-up-to-date satellite mifananidzo mukati meAutoCAD. Mushure mekudyidzana kwakabatana ...
Nguva dzekutarisa - Plugin yekuwana nhoroondo satellite satellite neAutoCAD
Nguva dzekutarisa ipulagi inonakidza kwazvo iyo inobvumidza kuwana kune enhoroondo satellite mifananidzo kubva kuAutoCAD, pamisi yakasiyana uye zvisarudzo. Kuve neiyo dhijitari contour modhi yandakaburitsa kubva kuGoogle Earth, ikozvino ndoda kuona mifananidzo yezvakaitika yenzvimbo ino. 1. Sarudza nzvimbo yekufarira. Maitiro acho ari nyore. Iyo ...
3 Nhau uye 21 yakakosha zviitiko mune GEO mamiriro - Kutanga 2019
Bentley, Leica uye PlexEarth ndevamwe vezvinhu zvinonakidza zvitsva kutanga muna Kukadzi 2019. Pamusoro pezvo, tinoratidza kuti takanyora zviitiko makumi maviri nezvinomwe zviri munzira, umo nharaunda yese yevanogadzira geoengineering vanogona kutora chikamu. Mimwe misoro yakataurwa muzviitiko izvi ndeiyi: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
Transoft Solutions uye Plexscape vanobvumirana kuti vape zvinonyanya kuenzaniswa zvemoto 3D muGoogle Earth
Transoft Solutions Inc., mutungamiri wepasi rose mukutakura kweinjiniya dhizaini uye software yekuongorora, yakabatana nePlexscape, vanogadzira Plex.Earth®, chimwe chezvishandiso zvinozivikanwa zveAutoCAD yekumhanyisa mapurani ekuvaka, einjiniya uye ekuvaka. (AEC). Chinhu chepakati chekudyidzana kwaive kubatanidzwa kweAuttronic® technology…
Zvakaitika kwandiri kushandisa Google Earth yeCadastre
Ini ndinowanzowona iyo mimwe mibvunzo mumazwi akakosha ayo vashandisi vanouya kuGeofumadas kubva kuGoogle injini yekutsvaga. Ndingaite cadastre ndichishandisa Google Earth? Mifananidzo yeGoogle Earth yakajeka sei? Nei ongororo yangu ichekwe kubva kuGoogle Earth? Vasati vandiranga nezve ...
AutoCAD-AutoDesk, Cadastre, Google pasi / mamapu
Google Earth 7 miganhu yakagadzirirwa mifananidzo ye ortho
Kana iyo nyowani vhezheni yePlex.Earth 3 yave kuda kuburitswa, isu tinoziva kuti kunyangwe ichitsigira kurodha kwewebhu mepu masevhisi, mukana wakakura wekuti kusvikira zvino wave kukwanisa kurodha zvimisikidzwa Google Earth mufananidzo ... hazvizove nyore zvakadaro. Izvi imhaka yekuti Google, iri kutsvaga kudzivirira ...
AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu
Plex.Earth 3.0 Masoja eWad Services kubva kuCotCAD
Plex.Earth 3.0 yauya kwandiri kutanga, iyo yandave nenguva yekuyedza ndichitsanangura zuva rekuwanikwa mune yekupedzisira vhezheni. Pamwe mumwedzi waNovember 2012. Inomhanya neAutoCAD 2013 Pamwe chinhu chinonyanya kugadzirwa ndechekuti iyi vhezheni inogadzirwa yakanangana neAccCAD 2013, kana chero yayo ...
UTM inogadzirisa zvirongwa zvinoratidzwa paGoogle Maps
Izvo hazviratidzike senge, asi sosi iyo PlexScape Web Services yaita kuti ivepo yekushandura marongero nekuvaratidza paGoogle Mepu chiitiko chinonakidza kuti unzwisise mashandiro ehurongwa hwematunhu akasiyana epasi. Kune izvi, nyika inosarudzwa kubva panhare inoratidza Coordinate Systems uyezve iyo ...
Ona UTM inosangana neGoogle Maps, uye uchishandisa ANY! Zvimwe kurongeka system
Kusvika ikozvino zvaive zvakajairika kuona UTM uye geographic zvinongedzo paGoogle Mepu. Asi kazhinji kuchengetedza iyo datum inotsigirwa neGoogle inova WGS84. Asi: Ko kana isu tichida kuona muGoogle Mepu, mubatanidzwa weColombia muMAGNA-SIRGAS, WGS72 kana PSAD69? Mubatanidzwa weSpain muETRF89, Madrid 1870 kana kunyange REGCAN 95? ...
Cartography, Innovations, kuororwa
Plex.Earth mifananidzo yakabva kuGoogle Earth Isiri pamutemo here?
Isu takaona pamberi pezvimwe zvirongwa zvakadzora mifananidzo kubva kuGoogle Earth. Georeferenced kana kwete, mamwe haachipo seStitchMaps uye GoogleMaps Downloader. Rimwe zuva shamwari yangu yakandibvunza kana izvo Plex.Earth inoita kubva kuAutoCAD inotyora marongero eGoogle kana kwete. Zvinotaurwa nemitemo yeGoogle http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…
Plex.Earth, muenzaniso wakanaka wekupinda mumusika weSpanish
Nhasi uno shanduro yeSpanish yePlexScape peji yakatangwa, iyo kunze kwechinyorwa chayo chekutanga cheGreek chaivapo zvakare muChirungu neFrench. Zvinotaridza senge chiito chakakosha, chatakaona zvinoratidza kubva kumberi, sezvo Plex.Earth mukati memitauro yayo inopfuura gumi yakatosanganisa chiSpanish mushanduro 10.…
Google pasi / mamapu, Innovations
Geofumadas ... 2 wikileaks pamberi pe2011
Nemazuva matatu chete kusvika pakupera kwa2011, ndakapihwa mvumo yekutaurirana kana mbiri idzi dzinoshandura hupenyu hwedu muna2012: 1. Microsoft inotenga Bentley Systems. Sezvo zvinonzwika, Microsoft yasvika muchibvumirano chekupedzisira chekutora musimboti weBentley Systems yakasvika muBentley Infrastructure 500; mari…
AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu, Microstation-Bentley, My geofumadas
Chinyorwa pakati pemwedzi inopfuura makumi mashanu
Mushure memwedzi inopfuura makumi mashanu yekunyora, ichi chidimbu. Pakutanga kuona, kunyange kusarudzwa kwave kwakavakirwa pakuonekwa kwemapeji, iyo radiography ndeyekuti: 50 dzine chekuita neAccCAD kana zvimiro zvadzo zvakamira. Dingindira rave rinogara zvachose, pakati penyaya dzeshanduro nyowani, mashandisiro anoshanda neCivil ...
Featured, INDEX, My geofumadas
Ita Google Earth Curves neAricCAD
Imwe nguva yapfuura ndakataura nezve Plex.Earth Zvishandiso zveAutoCAD, chishandiso chinonakidza kunze kwekutora kunze, kuisa mameseji mifananidzo yakatarwa uye kudhijitisa nemazvo, inogona zvakare kuita akati wandei maitiro munharaunda yekuongorora. Ino nguva ini ndoda kuratidza iyo kugadzirwa kwemakara mitsara kubva kuGoogle Earth. Zvichida chokwadi chekuti ...
AutoCAD-AutoDesk, Featured, Google pasi / mamapu, topografia
PlexEarth, izvo zvinounza 2.5 shanduro Google Earth mifananidzo
Ini ndakasvinwa maficha anounzwa neshanduro nyowani yePlexEarth, inotarisirwa kuziviswa pakupera kwaGumiguru 2011. Chikonzero chikuru chakaita kuti chishandiso ichi chive nekugamuchirwa kwakakosha ndechekuti inogadzirisa izvo zvisingakwaniswe nechirongwa Yakakurumbira CAD (AutoCAD) ine pasi ...
AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu, Innovations
Tumira mifananidzo uye muenzaniso 3D kubva kuGoogle Earth
Microstation, kubva pane vhezheni 8.9 (XM) inounza akateedzana eanoshanda kuti ubatane neGoogle Earth. Mune ino kesi ini ndoda kunongedzera kune kunotora kweiyo matatu-mativi modhi uye mufananidzo wayo, chimwe chinhu chakafanana neicho AutoCAD Civil 3D inoita. Aya mashandiro anogoneswa nekuita: Zvishandiso> geographic kana mune Microstation ...
Google pasi / mamapu, Microstation-Bentley, topografia
Available Beta Tools 2.0 PlexEarth
Zuva rapfuura ndanga ndichitaura nezvenhau iyo vhezheni 2.0 yePlexEarth Zvishandiso zveAutoCAD yaizounza, chimwe chezviitiko zvinonyanya kukosha zvandakaona paGoogle Earth nenhengo yeAutoDesk Developer Network (ADN). Nhasi iyo Beta vhezheni yaburitswa, iyo inogona kutorwa pasi, kuyedzwa uye chakakosha chinhu ...
AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu, Video
peji 1 peji 2 peji Next